Ikhomishini ngeState capture kumele iphenye inkohlakalo kuhulumeni, igxile kwabakwaGupta | News24
Ikhomishini ngeState capture kumele iphenye inkohlakalo kuhulumeni, igxile kwabakwaGupta
Johannesburg – UMengameli Jacob Zuma ufuna ikhomishini ephenya ngezinsolo zokubanjwa koMbuso ngobhongwane liphenye ngazo zonke izinhlobo zenkohlakalo ezikhona kuhulumeni, okubalwa izinsolo abekwa zona, ongqongqoshe beKhabinethi lakhe, umndeni wakwaGupta kanye nezinkampani ezingaphansi kukahulumeni.
Ngokwamaphuzu abekiwe abonwe yiNews24, uZuma uthi ikhomishini kumele iphenye ukuthi ngabe ngubani owenza imizamo futhi leyo mizamo yahamba yafikaphi, ekutheni kufakwe umoya izikhulu zikahulumeni, okubalwa namasekela ongqongqoshe kanye namalungu amabhodi ezinkampani ezehlukene ezingaphansi kukahulumeni, ukuba kube khona abazuzayo ngandlela thize.
"Ikhomishini kumele iphenye futhi nezinsolo zikalowo owayeyiSekela likaNgqongqoshe wezeziMali uMncebisi Jonas nowayeyiLungu lePhalamende uVytjie Mentor, zokuthi bathenjiswa ngumndeni wakwaGupta izikhundla kwiKhabhinethi," eloba.
OLUNYE UDABA: UMengameli Zuma uphikise isinqumo ngolweState Capture
UZuma ufuna futhi ukuthi ikhomishini, ezoholwa yiSekela likaMengameli wamaJaji uRaymond Zondo, iphenye ukuthi ngabe zikhona yini izikhulu zikahulumeni ezaba nesandla ekuvalweni kwama-akhawunti asebhange omndeni wakwaGupta ngendlela engalungile.
Lokhu kungukuhambisana nemiyalelo eyabekwa yilowo owayenguMvikeli woMphakathi uThuli Madonsela, ngesikhathi ethula umbiko ngeState capture.
UMadonsela wenza izincomo ezithi kumele kube yijaji elizoqokwa nguMengameli wamaJaji uMogoeng Mogoeng elizohola ikhomishini ezophenya ngalezi zinsolo.
Umndeni wakwaGuopta usolwa ngokuba nesandla kwezinye zezinqumo ezinkulu ebezenziwa nguMengameli Zuma, okubalwa nokuqokwa kongqongqoshe kanye nokuphathwa kwezinkampani zikahulumeni.